ကလေးတွေကို အသီးအရွက်စားဝင်အောင် ဘယ်လိုကျွေးမလဲ? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကလေးတွေကို အသီးအရွက်စားဝင်အောင် ဘယ်လိုကျွေးမလဲ?
ကလေးတွေကို အသီးအရွက်ကျွေးရတာဟာ မေမေတို့ အတွက်အခက်ခဲဆုံး အလုပ်လို့တောင်ပြောလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးကို အသီးအရွက်ကလည်း ကျွေးချင် ကလေးက လုံးဝမစား နဲ့ တော်တော် စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ တချို့မေမေ တွေဆို လက်လျှော့ပြီး ဆက်မကျွေးတော့ပါဘူး။ ကျမပြောချင်တာကတော့ လွယ်လွယ် လက်မလျှော့ကြပါနဲ့လို့။ အသီးအရွက် စုံလင်အောင်စားမှ ကလေးငယ်ဟာ ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအရွက်တွေဟာ ရောဂါကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘာနဲ့မှ အစားမထိုးနိုင်တဲ့ အရာတွေပါ။ တခြားကလေးတွေက ဒီလိုအသီးအရွက် ကောင်းကောင်းစားနေတာ မြင်ရင် မေမေတွေ စိတ်မကောင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့ပြောကြတာက ကျမကလေးက အရွက်မစားဘူး၊ အသားပဲစားတာတို့၊ နို့မှုန့်မှ သောက်တာတို့ အဲတာတွေက ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကလေးကို မချစ်ဘဲ နှစ်ရာရောက်ပါတယ်။
ဘယ်လိုဝင်အောင် ကျွေးရမလဲ ဆိုတော့ ကလေး တစ်ယောက်ဟာ အစားအသောက် အသစ်တစ်မျိုးကို ချက်ချင်းလက်မခံပါဘူး၊ ဥပမာ အချိုကို ကလေးတိုင်းနှစ်သက်ပါတယ်။ အသီးအရွက်ရဲ့ စိမ်းရွှင်ရွှင်အနံ့ဟာ ကလေးတွေ အတွက် နှစ်မြို့စရာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကျွေးရခက်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် အစားအသောက် အသစ်ကို လက်ခံဖို့ ၅ ကြိမ်ကနေ ၁၄ ကြိမ် ကျွေးကြည့်ရပါမယ်။ ဒါဟာ စနစ်တကျ သုတေသန လုပ်ထားတဲ့ စာတမ်းများအရ ပြောတာပါ။ ၂ကြိမ် ၃ကြိမ်လောက် ကျွေးကြည့်ပြီး ကလေးက ထွေးထုတ်တာနဲ့ လက်လျှော့လိုက်တာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး။ မကြာမကြာ ပြန်ကျွေးကြည့်ရပါမယ်။
မိမိရဲ့ ကလေးစားသောက်မှု ပုံစံဟာ မိခင်နဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က အသီးအရွက်ကြိုက်တဲ့ ကလေးဟာ အသက်ကြီးလာသည့်တိုင်အောင် ကျန်းမာတဲ့ အစားအသောက်ကိုသာ ဆက်လက်စားသုံးပါတယ်။ ငယ်ငယ်ဘ၀မှာ ရယ်ဒီမိတ်နဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးဟာ ကြီးလာရင် ရယ်ဒီမိတ်ကြိုက်မှာ မလွဲပါပဲ။ အငန်စားတဲ့ အိမ်က ကလေးဟာ အငန်ကြိုက်သလိုပါပဲ။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြုပြင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးကြိုက်မယ့် ပုံစံလေးတွေ ပြင်ဆင်ပေးတာမျိုး၊ အရွယ်အစား သေးသေးတုံးတာမျိုး၊ ပန်းကန်ထဲမှာ အရောင်စုံ ပါအောင် ထည့်ပေးတာ စတာတွေဟာ
ကလေးငယ်တွေကို အစားစားချင်အောင် ဆွဲ ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို အသီးအရွက်ဝင်အောင် ကျွေးနိုင်ကြပါစေ။
အလွန်တော်တဲ့ မေမေများ အတွက် :-*